Rio Ferdinand oo falanqeeye ka ah shabakada “Sky Sports” ayaa magacaabay kooxda uu ku biirayo xilligan Philippe Coutinho .. %
Rio Ferdinand oo falanqeeye ka ah shabakada “Sky Sports” ayaa magacaabay kooxda uu ku biirayo xilligan Philippe Coutinho ..
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 25, 2020
Kooxda Barcelona ayaa sugeysa go’aanka Bayern Munich ee ah in heshiiska amaahda ah xiddiga xulka Brazil ee Philippe Coutinho ay ka dhigto mid joogta ah, maadaama ay dooq u heysato inay si toos ah ugu iibsato qiimo dhan 120 milyan euro.
Haddii ay Bayern Munich go’aansato in Philippe Coutinho uu ku laabto Barcelona, wuxuu xiddiga xulka Brazil doorbidi doonaa inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League sida Manchester United iyo Chelsea, sidoo kale waxaa jira wadahadalo u dhexeeya isaga iyo kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia Rio Ferdinand oo falanqeeye ka ah shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa wuxuu aaminsan yahay in kooxda ku haboon in Philippe Coutinho uu ku biiro xilligan la joogo ay tahay Tottenham Hotspur, sababa la xiriira ciyaartoyda ay heysato naadiga reer London.
Philippe Coutinho wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn marka uu joogay Liverpool, laakiin tan iyo markii uu ka tagay ma uusan helin booskiisa.
Barcelona wuxuu ku dhibtooday inuu la qabsado, Bayern Munich sidoo kale uma fiicneyn isaga.
Waxaan u maleynayaa inay wax weyn u noqon laheyd Tottenham Hotspur hadii uu ku biiro isaga suuqa xagaaga ee soo aadan, ciyaartoy sida Harry Kane, Son Heung-min iyo Dele Alli, inay quudin doonaan ciyaaryahan sida Coutinho.
Casemiro iyo Dani Alves oo farriin gaarsiiyey ciyaaryahan reer Brazil ah, kaasoo 2,000 oo qumbe ah maalintii hela!
Pelé ayaa sheegay xiddiga uu arko inuu yahay kan ugu fiican kubadda cagta ee adduunka Messi & Ronaldo